Iindlela ezi-14 eziSebenzayo zokuBamba iiTray eziBomvu | Izisombululo ze-OMG
Iqhosha eliphambili lokuPhalaza okungxamisekileyo, Ikhamera yamaPolisa oMzimba oMdaka, ukuKhangelwa kweGPS kunye neBhedi yokuPhuma ePalam Alarm, Umthengisi weKhamera efihliweyo efihliweyo- Ikhaya kunye neSibhedlele
Iindlela eziPhezulu ze14 eziSebenzayo zokuBamba iiTray eziBamba ngesandla
Lixesha lokuba umlingane wakho abambe isifuba kwakhona ukuba unoluvo lokuba iqabane lakho likrelekrele ebekukrexeza ngalo lonke ixesha. Amaqabane okukopela afunyanwa kwihlabathi liphela kwaye ukufikelela kwezixhobo kuwenza ukuba abalekele umbono wakho kwaye aqhubeke nokungathembeki. Ukuba ukwimeko efanayo musa ukukhathazeka ngayo. Unokubamba iqabane lakho ngoncedo lwetekhnoloji yale mihla enjengeKhamera efihliweyo, iRekhodi yelizwi, kunye neeGPS Trackers. Ngolwazi oluthe kratya ndwendwela iwebhusayithi yethu kwaye cofa apha. Iimpawu ezisisiseko zengqondo kunye nokusebenzisa itekhnoloji yale mihla kunokukunceda ubambe iqabane lakho. Ungayifunda imiyalezo yakhe kwaye ujonge imiyalezo yakhe kuFacebook ukumjonga. Kukho iindlela ezininzi zokufumanisa inyani ukongeza ekuthembeni indalo yakho kunye nokuziva into enokwenzeka yokuthandabuza eye yasebenza kumcuphi ngaphakathi kwakho. Zininzi iimpawu 'zokukopela' onokuthi uzityeshele okanye uziphephe ezinokukwenza uqonde ukuba iqabane lakho liyakhohlisa okanye alikho. Xhomekeka kwingqiqo yakho kwaye, nangona ukumoyisa kwasekuqaleni kungayisombulula ingxaki ngokukhawuleza, hlalutya imeko kuqala kwaye ulandele ezi ndlela zili-14 zokubamba iqabane lakho lingxamile.
Ngaba ukulungele ngenxa yokungathembeki kwiQabane lakho?
Okokuqala, zibuze ukuba ucinga ukuba iqabane lakho liyakopela okanye akunjalo. Ukuthetha kunye nokujongana kunokukunceda ususe umba wokukopela kubudlelwane bakho ukuze uqhubeke njengesibini. Unako nokulandela naziphi na kwezi ndlela okanye uzame ukufumana impendulo evela kuye ukwanelisa umnqweno wakho wokufumanisa ukuba uyakhohlisa na okanye akakhohlisi, yiyo loo nto umnyanzela ukuba akuthembise ukuba akasoze aphinde aqhathe. Enye indlela kukuhlola umyeni wakho okanye iqabane lakho nokuba kukukhangela amanqaku okanye ukumbamba ngesandla, kungoko siqokelele olu phando noluhlu lweendlela ezili-14 zokubamba umntu okopayo. Ungavumeli iqabane lakho likugcine ebumnyameni, njengoko inguwe obencama izinto ezininzi ngenxa yakhe, igama lakho lokugqibela umzekelo. Apha sibonisa iindlela ezili-14 ezifanelekileyo zokubamba umntu okopelayo ngesandla esibomvu. Kwaye izixhobo zethu ezikumgangatho ophezulu ziya kukunceda ekubambeni iqabane lakho lokukhohlisa ngeenkcukacha ezithe kratya Cofa apha.
1. Iitshizi zikhona kwihlabathi liphela:
Ngaba ukhe wabona iqabane lakho ngokusebenza ngokungaqhelekanga okanye ngokungathembi, okanye naluphi na utshintsho olutsha ekuziphatheni kwakhe? Iimpawu zikuyo yonke indawo. Ungamxelela ukuba uqalile ukunxiba iimpahla ezingcono, esandul 'ukuqala ukuya kwindawo yokuzivocavoca ukuze asebenze kakhulu okanye efumana imiyalezo kunye ne-WhatsApp ngokuqhubekayo. Ezi ziimpawu ezisisiseko ezinokuthetha ukuba iqabane lakho liyakopa; Nangona kunjalo, banokuba yimisebenzi engacacanga enokuthathwa njengeempawu zokukopela. Kuba lo mba ubalulekile kwaye uthandekile, qhubeka wenze naziphi na iimpazamo kwaye ufune izibonakaliso zokuqinisekisa ukuba uyakopa ngaphambi kokuba ufikelele esiphelweni. Ekugqibeleni, ukuphikisana ngengxoxo nomyeni wakho kuya kukunceda ukuba uziphelise kwangoko.
2. Utshintsho kwindlela:
Wonke umntu unendlela emiselweyo yemihla ngemihla ayilandelayo yonke imihla engazi. Umlingane wakho uneshedyuli engaguqukiyo yokuya ekhaya emva komsebenzi, kodwa ukuba ngokungalindelekanga uhlala emva kwexesha eofisini ukuze asebenze okanye akhangele ixesha lokubhiyozela usuku lokuzalwa okanye iqabane lakho ongamenywanga kulo, kwaye ngokuqinisekileyo angangumyeni okopayo . Nangona kukho ukuxolelwa, abantu abakhohlisayo benza izizathu ezininzi rhoqo ukuba abanomdla kumaqabane abo.
3. Utshintsho kwisitayile sokulala:
Imizimba yabantu isebenza ngokujikeleza ibhayiloji yabo. Kuyinyani ukuba iqabane liyayazi inkqubo yeqabane lakhe kunye nendlela abalala ngayo, xa belala, xa bevuka, njl njl. Njl. Ukuba iqabane lakho likukreqile, liya kuphuma ebhedini ebusuku okanye livuke ekuseni kusasa ngakumbi kukhefu lwefowuni ke kufuneka ulumkele uphawu olibonisa ukuba ungumkhohlisi.
4. Phinda usebenzise i-Bin ye-PC yeQabane lakho:
Ukuba awonelisekanga kukuziphatha kweqabane lakho kwaye uziva ngathi uyakukhohlisa, kunokubakho ifoto yesithandwa sakhe esigcinwe kwikhompyuter yakhe njengefayile efihliweyo okanye phantsi kwegama lefayile elingahleliwe. Ngoku, ukuba ujonga ikhompyuter yakhe, khangela umfanekiso okanye enye into naphina, nokuba kungaphakathi kwiRekhnoloji yeBhini apho zonke iifayile ezisusiweyo ziqokelelwa de kube kungafuneki. Le yeyona ndlela ilungileyo yokuthatha isibonelelo kwitekhnoloji yokubamba umntu okopelayo ngobungqina. Ukujonga iifayile ezifihliweyo zePC, ungasebenzisa iYouTube okanye uGoogle ukufunda ukuba uzenze njani, kuba kulula ukwenza nokuqonda.
5. Umyeni okopela uhlala efihla ifowuni yakhe:
Inqaku elichazayo nelomeleleyo xa kufikwa kukrexezo kubudlelwane kuxa iqabane lakho lizama ukufihla ifowuni yalo. Akuthembeki ukuba azame ukugcina ifowuni yakhe ikude kuwe ngokuyithatha naphina apho aya khona ngaphandle kokuyishiya ingasebenzi kwenye indawo, ke oku kunokuthetha ukuba unengxaki. Zama ukubona ifowuni yakhe kwaye ujonge iifowuni zakhe, i-WhatsApp, i-Facebook, kunye nemiyalezo ebhaliweyo, kunye nezinye iinkcukacha ukuze ufumane naluphi na ulwazi olungenakuthenjwa okanye olubonakalayo kwaye umbambe ngesandla, eqinisekisa ukuba uliqabane lokukhohlisa kwi isiphelo.
6. Utshintsho kwindlela yakhe yokubrasha:
Ukuba iqabane lakho asilophawu lwesitayile okanye lefashoni, kuya kufuneka ukhathazeke ukuba ngequbuliso alahla umkhwa wakhe osisiqhwala kwaye asebenzise into ethambisayo ngokunxiba iimpahla ezintsha kunye nesiqhumiso esenziwe kakuhle, ukuzivocavoca, ukubetha umthambo, nokunye okuninzi. Utshintsho oluqhelekileyo aluhlali luhlangana neqabane lokukopela, nangona kunjalo, utshintsho olungalindelekanga lunokuveza okuninzi malunga nokuba iqabane lakho likukopa okanye cha. Zijonge ngeliso elibukhali ezo nguqu zinokwenza ukuba ungathembani.
7. Ukuqala kwingxabano yasekhaya:
Ehlala enxulumene nobudlelwane obungenabulungisa, uya kuzama ukuphuma endlwini emva kokuthatha ingxabano kunye nawe, kwaye amathuba kukuba uya kuphuma endlwini kusithiwa unomsindo wokubona isithandwa sakhe. Abafazi abaninzi baveze ukuba abayeni babo bahlala bekhetha ukuxabana, ke ukuba oku kuyenzeka kuwe, zama indlela encinci yokuhlola apho uyakucelwa ukuba umlandele ukuze wazi ngendawo akuyo phantsi kwesizathu sokuqhwala sokuba ucele uxolo ngengxabano ukuba ubanjiwe.
8. Ukubamba umkhangeli obomvu-ngesandla ngesandla:
Sebenzisa itekhnoloji kunye nezixhobo ekubambeni iqabane lakho lokukopela, ukubona naziphi na iimpawu kwaye unike ubungqina malunga nokuba iqabane lakho likukopa okanye akunjalo yindlela efanelekileyo yokumtyhila. Umlingane wakho unokuyicima ngokulula imiyalezo ye-WhatsApp kunye nesicatshulwa kodwa unokuthatha isipele semiyalezo yakhe ye-WhatsApp. Kukho isoftware ekhoyo ngokulula enokuguqula ifayile yesisele, umzekelo, iBackuptrans yokudluliselwa kwe-WhatsApp ku-WhatsApp.
9. Bamba umpheki obomvu ongeniswe zizinto ezizezeleyo:
Kwi-smartphone yeqabane lakho, vula i-Facebook, i-WhatsApp okanye imiyalezo ebhaliweyo, chwetheza kwindawo yokukhangela igama okanye amabinzana athile kwaye ubone ukuba zeziphi iziphumo ezizayo. Kungenzeka ukuba iqabane lakho likwazi ukucima ezi zikhangelo; amathuba okuba uya kufumana into efanelekileyo yokufumana idatha ekhoyo kwaye uyisebenzise ukumbambisa ngesandla.
10. Bamba umpheki obomvu ngesandla esineenkcukacha ezingeyonyani:
Kuya kuthatha imizuzu embalwa ukwenza iprofayili eyinyani kuFacebook, okanye kwi-WhatsApp, uye wenze i-akhawunti engeyonyani. Ngoku, unokujonga iqabane lakho ngokuncokola ukuzehlulela ukuba ukhetha ukukopela okanye hayi. Kuya kufuneka umenze azive ekhethekileyo kwaye athethe naye kakuhle ukuze afumane iimfihlo ezifihlakeleyo angaziyo ukuba azabelana nawe ngazo. Ukudlala ngesifuba neqabane lakho kwiprofayili engeyonyani ikuvumela ukuba ujonge impendulo yakhe, nangona kunjalo, zilungiselele ukothuka ukuba ufuna ukudibana kwakhona. Ukuba nenombolo engeyonyani kwi-WhatsApp okanye ekudaleni iphrofayleyingeyonyani kusebenza ngokulinganayo ekuhlalutyeni ukuba iqabane lakho likukreqo okanye akunjalo.
11. Sebenzisa iikhamera ezifihliweyo ukubamba i-cheater:
Ukuba i-intuition yakho ikwazisa ukuba iqabane lakho likrelekrele, libeke esweni ngoncedo lekhamera efihliweyo eyifihla kwizinto zayo okanye ekhaya. Unokurekhoda incoko yakhe eyenziwe kwifowuni ukuba unayo imakrofoni efakiwe. Oku kunokuba luncedo ngokwaneleyo ukuba ube nokufikelela kwiimfihlo anazo okanye kwinto ayenzayo xa ungekho kuye. Ukufihla ipeni yesiporho lolunye uluvo oluhle, kuba oku kukuvumela ukuba ufumane ulwazi malunga neofisi yakhe ukuba ufunde naluphi na uthando lwofisi, olwandisiweyo kwihlabathi liphela, ngokufanayo lonakalisa ubudlelwane obuninzi kwiminyaka edlulileyo. Ukuba ufuna ukulandela umlingane wakho, ungathatha inzuzo yezixhobo zethu ezisemgangathweni kwaye undwendwele ikhonkco kwiinkcukacha ezithe kratya Cofa apha.
12. Sebenzisa i-GPS Tracker ukulandelela indawo yeqabane lakho kwaye uyibambe ngesandla:
Ngaba ukhathazekile ngenxa yeqabane lakho elineempawu ezithandabuzekayo? Iitshipsi zeGPS kunye nezixhobo ziya kukunceda ukulandelela indawo yakhe ngexesha elifanelekileyo. Kukho izixhobo ezincinci zeGPS kunye nee-transmitter onokuzinamathela kwimoto yakhe okanye kwifowuni. Yintoni iGPS Tracker? I-GPS Tracker kukujonga indawo ngokusetyenziswa kwenkqubo ye-Global Positioning System (GPS) ukulandelela indawo yomntu okanye into ekude. Itekhnoloji yakutshanje yeNkqubo yokuBekwa kweHlabathi ingachonga ubude, umphakamo, umkhombandlela wekhondo kunye nesantya somhlaba weethagethi.
Ngokusebenzisa iGPS, uya kukwazi ukulandelela iintshukumo zakhe kwimephu kwaye ufumanise indawo apho achitha khona ixesha elininzi ngaphandle kweofisi, elithuba elifanelekileyo lokuba umbambe unikezele ngakubomvu ngesandla. . Ukuba ufuna ukubek 'esweni umyeni wakho ngoncedo lwetekhnoloji yale mihla unokuthatha isibonelelo kwiimveliso zethu ekumgangatho ophezulu ukulandelela imisebenzi yakhe. Cofa apha ukukhangela izixhobo zethu ezikumgangatho ophezulu.
13. Mbambe ngokujonga ukungena-kunye nokujonga kwakhona:
Imithombo yeendaba yeNtlalo enje nge-Facebook kunye nezinye iiwebhusayithi zonxibelelwano zenze unxibelelwano kunye nokwabelana ngeefoto kunye neenkumbulo kube lula kakhulu. Unokusebenzisa u-Facebook ukuphonononga iiwebhusayithi, ezinokukunceda ukubonisa ukuba iqabane lakho liyakhohlisa okanye alikho, njengoko livumela abasebenzisi balo ukuba bajonge kwindawo yabo kwaye bongeze uphononongo kwezona bhanyabhanya zakutshanje, iivenkile zokutyela kwaye phantse nantoni na onokuyilanda . Sihlala singena kwaye sithumela yonke into kweli hlabathi lilawulwa yimidiya yoluntu, kodwa le yinto iqabane lakho elinokuthi liyiphephe ukuba iyakhohlisa. Nangona kunjalo, unokufaka umfanekiso werestyu yakhe ayityelele amaxesha amaninzi nomntu ongamaziyo okanye aye kwiimuvi ngaphandle kwakho, ke oko kubangela ukungavisisani phakathi kwenu nobabini. Ungabuza imibuzo ukucacisa umoya kwaye kulapho uya kuba nayo impendulo yokuba uyakhohlisa na okanye hayi.
14. Ukusetyenziswa komnxeba wokunxibelelana:
Kulula ukukhohlisa umnxeba ngokugcina umnxeba phantsi kwelinye igama, umzekelo, 'David' endaweni ka 'Annie', oko kuthetha ukuba angadlala ngaphandle kokubanjwa ukuba awuthethi nayo yonke iminxeba ayifumanayo ngaphambi kokuba ayenze . Lixesha lokuba unxibelelwano lwe-Spy lungene. Ikuvumela ukuba ujonge abafowunelwa bakho abakhohlisayo kunye neefowuni zefowuni ngeefowuni eziphumayo nezingenayo neziphumayo, nokunye okuninzi. Ungayisebenzisa njani? Ilula kakhulu. Okwangoku khuphela usetyenziso kwi-smartphone yakho kwaye ugcine kwinombolo yomnxeba kwifowuni ekujolise kuyo, eyinombolo yeqabane lakho lokukopela, kwaye ukulungele ukubeka esweni. Ke, uya kuba nakho ukufumana ulwazi malunga nayo yonke iminxeba eyenziwa liqabane lakho okanye eliyifumanayo, nangona ukufaka irekhoda yefowuni kwifowuni yeqabane lakho kwaye ukuyifihla kuluncedo ngakumbi, njengoko uya kuba nakho ukumamela iminxeba eyenziweyo okanye eyamkelweyo iqabane lakho lokukhohlisa xa engekho
5018 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-12 Namhlanje
Izisombululo ze-OMG-iSwitzerland 500 Enterprise ka-2018/2019